Dr Abiy miyuu u kala eexanayaa Soomaalida iyo Oromada? - BBC News Somali
Dr Abiy miyuu u kala eexanayaa Soomaalida iyo Oromada?
Image caption Ra'isulwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed
Wasaaradda Nabadda ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in 1.2 milyan oo qof oo horay dalka gudihiisa ugu barakacay ay hadda dib ugu laabteen deegaannadoodii.
Ra'iisulwasaare Abiy Axmed ayaa booqday dad lagu qiyaasay 3,000 oo ruux oo ku laabanaya guryahooda oo ku yaalla koonfurta dalka Itoobiya.
Ilaa iyo haddana ay jirin cid caawisay barakacayaashaasi marka laga reebo caawimaadyo kooban oo hay'adaha ama laamaha dowliga ah ka soo gaara oo aan noolashooda wax badan ka beddeleyn.
Image caption Nimco Yaasiin oo ku nool xerada Qolaji
"Gaajo ayaa noogu daran, biyo xumo ayaa jirta, dawladdu waxay sheegtay in xaaladdanadu wanaagsan tahay, balse dadku in ay macluuli mariso ayaa laga yaaban yahay" ayuu yiri Ibraahim Cabdullaahi Macallin Xasan oo ka mid ah dadka qaxootiga ku ah Qoloji.
Image caption Xerada qoxootiga Qolaji
Image caption Kumannaan shacab ah oo ku barakacay isku dhacyo beeleedyo dalka Itoobiya ka dhacay
"Qoysaska dib u dejinta loo sameeyeyna guriya ayaa dib looga dhisay waxaana la siiyey qalabki wax soo saarka beeraha ay u adeegsan lahaayeen" ayey tiri Mufariyaat.
Qowmiyadaha isku dhaca ayaa ku batay dalka Itoobiya tan iyo markii uu xilka la wareegay Ra'iisulwasaare Abiy Axmed.
Arrintan ayaa la tilmaamay in ay halis ku tahay isbadallada degdega ah ee uu wado raii'sul wasaare Abiy Axmed.
Image caption Rabshadaha Soomaalida iyo Oramada waxaa ku barakacay dad badan
31 bishii Agoosto, hay'adda caruurta Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in 2.8 milyan oo qof ay ku barakaceen dalkaasi, waxaana ntooda badan barakacooda sababay isku dhacyo iyo abaar.
Hay'adda qaxootiga ee dalka Norwey ee NRC loo soo gaabiyo ayaa dhankeeda sheegtay "in dad ka badan 2.5 milyan oo qof" ay ku barakaceen gudaha Itoobiya bishii August.
In ka badan 1.4 milyan oo qof ayaa guriyahooda ka barakacay Itoobiya intii u dhaxeysay Janaayo iyo Juun 2018, sida ay sheegtay hay'adda la socodka dadka dalkooda ku barakacay ee fadhigeedu yahay Geneva.